bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Who Rules The World – Gold Channel Movies
Apr. 18, 2022 Tencent Video
Episode 1 Apr. 18, 2022
Episode2Apr. 18, 2022
Episode3Apr. 18, 2022
Episode4Apr. 18, 2022
Episode5Apr. 18, 2022
Episode6Apr. 18, 2022
Episode7Apr. 18, 2022
Episode 8 Apr. 18, 2022
Episode9Apr. 19, 2022
Episode 10 Apr. 19, 2022
Episode 11 Apr. 20, 2022
Episode 12 Apr. 20, 2022
Episode 13 Apr. 25, 2022
Episode 14 Apr. 25, 2022
Episode 15 Apr. 26, 2022
Episode 16 Apr. 26, 2022
Episode 17 Apr. 27, 2022
Episode 18 Apr. 27, 2022
Episode 19 May. 02, 2022
Episode 20 May. 02, 2022
Episode 21 May. 03, 2022
Episode 22 May. 03, 2022
Episode 23 May. 04, 2022
Episode 24 May. 04, 2022
Episode 25 May. 09, 2022
Episode 26 May. 09, 2022
Episode 27 May. 10, 2022
Episode 28 May. 10, 2022
Episode 29 May. 11, 2022
Episode 30 May. 11, 2022
Episode 31 May. 16, 2022
Episode 32 May. 16, 2022
Episode 33 May. 17, 2022
Episode 34 May. 17, 2022
Episode 35 May. 18, 2022
Episode 36 May. 18, 2022
Episode 37 May. 23, 2022
Episode 38 May. 23, 2022
C-drama ပရိတ်သတ်တော်တော်များများ စောင့်စားနေကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာမ Qing Ling Yue (倾泠月) ရဲ့ “Qie Shi Tian Xia” (且试天下) ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ဝတ္တုကို အသက်သွင်းမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လို့ဆိုတာအပြင် နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေပါဝင်လို့လည်း စောင့်မျှော်ချင်စရာ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါဆို အဓိက ဇာတ်ဆောင်မင်းသားက ဘယ်သူပါလဲ။
2016 ခုနှစ်မှာ Love O2O ဆိုတဲ့ ဂိမ်းအခြေခံဒရာမာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေ ရင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား Yang Yang ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သမိုင်းအခြေခံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုတာကြောင့် Yang Yang ကို Once UponaTime 2017 ထဲကလို ရှေးအဝတ်အစားနဲ့ အထာကျကျ တွေ့ရဖို့ အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီကရော ဘယ်သူပါလဲ။ Oh! My Emperor (2018) နဲ့ လူသိများတဲ့ မင်းသမီး Zhao Lusi ပဲဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ ခါတိုင်းတွေ့နေကြ နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့တင်မကဘဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံစံကိုပါ တွေ့ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဇာတ်ပို့တွေအနေနဲ့လည်း The Untamed ထဲက Xuan Lu လို ပရိတ်သတ်နဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းအရ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှစ်ပါးက ဘုရင်တောင်လို့အမည်တွင်တဲ့ အရှေ့နန်းဆက်ရဲ့ နံပါတ်တစ်တောင်ရဲ့ တောင်ထိပ်မှာ မပြီးပြတ်တဲ့ စစ်တုရင်ကစားကွက်တစ်ခု ထားခဲ့ပါသတဲ့။ အလားတူပဲ အရှေ့နန်းဆက်က အခက်အခဲအကြပ်အတည်းကြုံနေရချိန် ထိုစစ်တုရင်ကွက်မှာ စာကြောင်းအချို့လည်း ချန်ထားခဲ့ပါသတဲ့။
ရိုးရှင်းပြီး နှင်းဖြူ၊ငွေလရောင်အလား ဖြူဆွတ်တဲ့ ဝတ်ရုံကို ဆင်မြန်းတတ်သူ၊ ပြိုင်စံရှားကျက်သရေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်သူ၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်တတ်သူ၊ လေအလား ဖမ်းမရသူ၊ သိုင်းလောကရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရသူ အမျိုးသမီး။ ဒီလို ပျက်ခေတ်ကြီးမှာ သူ(မ) ဘယ်လိုများ လေလို ပေါ့ပါးနိုင်ပါ့မယ်။
သူ(မ)နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ အနက်ရောင်မဟူရာအဝတ်ကို ဆင်မြန်းလေ့ရှိသူ အမျိုးသား။ ဂုဏ်အိန္ဒြေပြည့်ဝပြီး ချောမောသူ၊ ကြင်နာတတ်ပြီး သည်းခံတတ်သူ၊ သိုင်းလောကရဲ့ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ခံရသူ။ ဒီလိုမျိုး စာရိတ္တခေါင်းပါးတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ သူ ဘယ်လိုများ ဆက်လက်ပြီး ကြင်နာတရား ထားနိုင်ပါမလဲ။
ကြီးမြတ်မှုတွေနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ မင်းသားတစ်ပါး။ သိုင်းပညာက တစ်ဖက်ကမ်းခေတ်လို့ မာနထောင်လွှားပြီး ခွန်အားကြီးမားသူ။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ မာန်မာနကို ပိုင်ဆိုင်သူလို့ ဆိုရသူ။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ လောကမှာ သူ့ရဲ့ ကြီးစိုးမှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မှာပါလဲ။
လှပမှုကျော်ဇောပြီး မြင့်မြတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါး။ တွက်ချက်တတ်တဲ့ စိတ်နှလုံးရှိပြီး ရည်မှန်းချက်မြင့်မားသူ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နန်းတွင်းမှာ သူ(မ) ဘယ်လိုများ ထိပ်ရောက်အောင် လုပ်နိုင်ပါမလဲ။
ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်လို့ လူသိများသလို သိုင်းပညာလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါး။ နိုင်ငံအခက်ကြုံနေချိန် သူ(မ)ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်ပါမလဲ။
လျှို့ဝှက်ပြီး သီးခြားဆန်သူ ပြည်သူအများက ချစ်အားပိုရသူ မင်းသားတစ်ပါး။ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေတဲ့ခေတ်မှာ သီးခြားဆန်နေနိုင်ပါဦးမလား။
မိသားစုနဲ့ တိုင်းပြည် ဘယ်လိုထိန်းညှိမလဲ
အချစ်နဲ့ အမုန်း ဘယ်လိုများ ကွဲပြားအောင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်ပါမလဲ
ကျေးဇူးတရားနဲ့ ရန်ငြိုး ဘယ်လိုပြန်ပေးဆပ်ကြမလဲ
မိန်းမပျိုနဲ့ လောက ဘယ်ဟာက ပိုအရေးပါပါသလဲ
ဒီလို ရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးမှာ အရည်အချင်းရှိသူ ပေါများလှပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပေါ်က စစ်တုရင်ကစားပွဲဟာ လူနှစ်ဦးကြားမှာပဲ ဆိုပေမဲ့ ကမ္ဘာလောကကို စိုးမိုးဖို့ကတော့ လူတစ်ဦးသာ လိုတာပါ။
ကဲ ဒီလိုမေးခွန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို အဖြေရှာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Gold Channel ကနေပြီး အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် လက်မလွတ်တမ်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
Reviewed by Tsuki-L
Original title 且试天下
ayemonkyawMay 19, 2022Reply
39 40 တင်ပေးပါအုန်း
ayemonkyawMay 15, 2022Reply
G Drive လေးတင်ပေးပါအုန်း
aungkowinMay 15, 2022Reply
ayemonkyawMay 13, 2022Reply
G Drive linkလေးတင်ပေးပါအုန်း မင်မင် 😟😟
Sprite 25May 5, 2022Reply
Ep 11 တင်ပေးပါဦး
ayemonkyawMay 1, 2022Reply
မင်မင်ရေ Ep 11နဲ့ နောက်အပိုင်းလေလည်ူးတွေထပ်တင်ပေးပါအုန်း
Yan Naing WinMay 1, 2022Reply
Ep11လည်းမတင် နောက်ထပ်လည်းဆက်မတင်ဘူး မမိုက်ဘူး မင်မင်ရာ